IPrincess Cruises yandisa ikhefu lokuhamba ngenqanawa eLos Angeles, Ft. ILauderdale kunye neRoma
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukubambisa » IPrincess Cruises yandisa ikhefu lokuhamba ngenqanawa eLos Angeles, Ft. ILauderdale kunye neRoma
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukwaphula iindaba zase-US • Ukubambisa • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zeLuxury • iindaba • Ukwakha kwakhona • Resorts • Xanduva • Tourism • uthutho • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
IPrincess Cruises yandisa ikhefu layo lokuhamba ngolwandle kwiCaribbean, kunxweme lwaseCalifornia, eMexico naseMeditera ngoJuni 30, 2021
Inkosazana yaseCaribbean: Iintsuku ezisixhenxe zokuhamba ngeenqanawa zaseNtshona naseMpuma zeCaribbean zanqumama
INkosazana enchanted: Iintsuku ezisixhenxe zeMeditera kunye neAdriatic, iintsuku ezisixhenxe zeMeditera yeNtshona, kunye neentsuku ezili-14 zeNtshona yeMeditera kunye neAdriatic Medleypaused
I-Ruby Princess: Iintsuku ezisixhenxe zoLwandle lwaseCalifornia lwaseCalifornia, iintsuku ezisixhenxe zaseMexico Riviera, kunye neentsuku ezintlanu zeCabo San Lucas Getaway
Ngelixa iPrincess Cruises iqhubeka nokusebenza noorhulumente kunye nabasemagunyeni kwizibuko ukugqibezela izicwangciso zabo zokubuyela kuhambo lokuhamba ngenqanawa, inkampani yandisa ikhefu lokuhamba ngenqanawa ngolwandle iCaribbean, iCalifornia Coast, iMexico neMeditera ngoJuni 30, 2021.
Unqumamo olusebenzayo luchaphazela olu hambo lulandelayo:
Inkosazana yaseCaribbean: Iintsuku ezisixhenxe zokuhamba ngeenqanawa zaseNtshona naseMpuma zeCaribbean
Inkosazana enchanted: Iintsuku ezisixhenxe zeMeditera kunye neAdriatic, iintsuku ezisixhenxe zeMeditera yeNtshona, kunye neentsuku ezili-14 zeNtshona yeLwandle iMeditera kunye neAdriatic Medley
Iindwendwe ezibhukishe kuhambo olurhoxisiweyo, Princess Cruises Inkqubo yokubhukisha kwakhona iya kuba nesibonelelo esongeziweyo sokukhusela iindwendwe kuhambo lwango-2022 kuhambo lwabo lowama-2021. Ngaphandle koko, iindwendwe zingakhetha ikhredithi yokuhamba ngenqanawa (i-FCC) elingana ne-2022% yendlela yokuhamba ngenqanawa ehlawulelweyo kunye nebhonasi eyongezelelweyo engabuyiswayo ye-FCC elingana ne-100% yendlela yokuhamba ngenqanawa ehlawulelweyo (ubuncinci beedola ezingama-10 zeedola) okanye imbuyiselo epheleleyo kwinto yoqobo uhlobo lwentlawulo.
Kwiindwendwe okwangoku ezibhukishwe kuhambo olurhoxisiweyo apho kungekho nqanawa ifanayo ifumanekayo ngo-2022, iindwendwe ziya kufumana ngokuzenzekelayo ityala elibuyiswayo le-cruise credit (FCC) elilingana ne-100% yemali yokuhamba ngenqanawa ehlawulelweyo kunye nebhonasi eyongezelelweyo engabuyiswayo yeFCC elingana ne-10 % yexabiso lokuhamba ngenqanawa elihlawulelweyo (ubuncinci be- $ 25). Kungenjalo, iindwendwe zinokucela ukubuyiselwa imali ngokupheleleyo kwifomu yoqobo yokuhlawula.
Izicelo mazifumaneke ngefom ye-Intanethi ngo-Epreli 15, 2021 okanye iindwendwe ziya kuthi ngokuzenzekelayo zifumane ukhetho lweCCC. IiFCCs zinokusetyenziswa nakweyiphi na inqanawa ebhukishwe kwaye ihamba ngomkhombe ngoDisemba 31, 2022.
INkosazana iya kugqithisela ikhomishini efunyenwe ziiarhente zohambo ukusuka kwisikhephe esirhoxisiweyo sango-2021 ukuya kubhukisho olutsha ngo-2022 ngokubhukisha okuhlawulwe ngokupheleleyo. Olu thuba lubonwa kwindima ebalulekileyo abayidlalayo kwishishini lomzila wenqanawa nakwimpumelelo.
U-Olumoko ubalekela uMongameli we-Tourism Federation e ...
I-IMEX America Smart ngoMvulo amanqaku aphambili abonisa ugqirha ...
Amazwe aseNtshona Afrika asungula imali enye kwi ...
UKumkanikazi Uthanda uClive Scott, iMG yeSofitel ...
Iinqwelo-moya zaseHawaii zibuyisa iinqwelomoya eTahiti
UFrontier usungula iiNqwelo moya ezingapheliyo eBelize zisuka eDenver ...
Izithintelo zokuhamba ngamazwe kunye nemimandla ngokwe ...